Dowladda Mareykanka oo ka hadashay halka ay marayaan doorashada dalka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Mareykanka oo ka hadashay halka ay marayaan doorashada dalka Soomaaliya
Dowlada Mareykanka ayaa ka hadashay halka ay haatan marayaan doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha Soomaaliya, taas oo dhawaan ka dhici doonta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.
War-saxaafadeed uu soo saaray afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka walaacsan tahay wararka sheegayo inay cabsi-gelin, musuq iyo qaladaad kale mar hore hareeyeen nidaamka doorashadda Soomaaliya.
Wuxuu afhayeenka war-saxaafadeedka ku sheegay in haatan loo baahan yahay in mudnaanta la siiyo jadwalka waqtiyeeysan ee la qaban doono doorashada guddoonka labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, isagoona dhinaca kale ku baaqay in la hubiyo kalsoonida iyo dhaqaajinta dhismaha ajendaha qaranka Soomaaliya.
Afhayeenka ayaa sidoo kale baaq u diray madaxda madasha qaran ee Soomaaliya, isagoona ugu baaqay inay ilaaliyaan dadaalka guddiyadda doorashada, si loo qabto doorasho hufan iyo in la buuxiyo kuraasta ka harsan baarlamaanka iyo in la hubiyo kuraasta loo qoondeeyey haweeenka.
Si kastaba ha ahaatee, war-saxaafadeedkaan ayaa kusoo beegmaya xilli doorashada Soomaaliya la sheegay inuu ka jiro musuq-maasuq iyo cabsi gelin aad u baahsan, waxayna arrinkaan keeni kartaa in meesha ay ka dhalato dowlad cusub oo si musuq-maasuq ah ku shaqeeysa.